Farmaajo oo caawa casho u sameeynaya saraakiishii Itoobiyaanka? Maxa looga hadlayaa? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Farmaajo oo caawa casho u sameeynaya saraakiishii Itoobiyaanka? Maxa looga hadlayaa?
Farmaajo oo caawa casho u sameeynaya saraakiishii Itoobiyaanka? Maxa looga hadlayaa?
Madaxweyne Farmaajo ayaa caawa casho ugu sameeynayo hooygiisa ee Madaxtooyada saraakiishii Sirdoonka iyo Ciidanka Difaaca Itoobiya ee maanta Kismaanyo kula soo kulmay Madaxweyne Axmad Madoobe.
Kulanka cashada caawa ayaa waxa la filayaa in Madaxweyne Farmaajo warbixn buuxda laga siiyo wixii wafdigu kala soo kulmeen Jubbaland iyo talaabada xigta oo ay Itoobiya iyo Farmaajo wadaqaadi doonaan.
Waxaan shaki ku jirin in Farmaajo iyo Itoobiya ay ka wada shaqayn doonaan in dagaal sokeeye ka dhaco Jubbaland si loo xaqiijiyo himilada ay isaga, Fahad iyo Kheyre ka leeyihiin deegaanka Jubbaland.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka qoomamaynayaan aaminaadii ay aamineen Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyaga oo u arkayay in uu yahay shaqsoi wadani Soomaaliyeed oo difaacaya qaraanimada Soomaaliyeed.
Waxaa wax lala yaabo ah in Farmaajo iyo kooxdiisa ay maanta ay doonayaa in ciidanka gumaysiga Itoobiya u istcimaalaan in la iska horkeeno shacabka Soomaaliyeed si dhiig Soomaaliyeed u daato.